विदेश जाने उमेर हदबन्धी कति हो ?
Thu, Aug 06, 2020 | 01:46:36 NST
एस के बुढा, रोल्पा, लिवाङ
प्रश्न : म अहिले ४५ बर्षको भएँ । रोजगारीका लागि विदेश जाने सोच बनाएको छु । म कुन देश जान सक्छु र ? यदी सक्छु भने कुन देश जान सक्छु ?
उत्तर : नियम अनुसार पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेका लागि बढिमा ३९ वर्ष उमेर तोकिएको छ । त्यसैले तपाईं पहिलो पटक विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने विदेश जानसक्ने सम्भावना थोरै छ । यदि तपाईं पहिले पनि रोजगारीका लागि विदेश गएर फर्कनु भएको हो भने पहिले तपाईंले काम गरेको आधारमा त्यहि कामका लागि जान पाउनुहुन्छ । त्यसका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको म्यानपावर कम्पनीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।